Costa Rica: Lahatsary antserasera miampy vazivazy tamin’ny fifidianana filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2018 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Swahili, English
(Marihina fa tamin'ny 3 Febroary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Sary avy amin'i thombo2 tao amin'ny flickr, nampiasaina araka ny lisansa CC
Voalohany, manana lahatsary antserasera nalefan'ny El Basureo isika, izay nanoloran'izy ireo ny vahaolana vaovao ho an'ny olana tranainy amin'ny tsy fahafantarana ny olona izay hofidiana. Tao anatin'ity fifidianana tany Costa Rica ity, ny efatra tamin'ireo kandidà miisa 6 nilatsaka ho fidiana no mpitarika: i Laura Chinchilla ao amin'ny antoko National Liberation, Otto Guevara libertaliana, Otton Solis ilay demaokraty sosialy ary i Christian Luis Fishman sosialista. Manolotra milina vaovao manambatambatra sy mampifanaraka ny toetran'ireo kandidà ny El Basureo, ary ahitana topi-maso sy maneho taratra ny toe-draharaha ara-politika Kostarikana ny anarana nivoaka avy tamin'izany fanambatambarana izany.
Fomba iray hampielezana vaovao sy fampielezan-kevitra amin'ny haino aman-jery ny lahatsary antserasera izay matetika esorina amin'ny fahitalavitra aorian'ny fotoana fohy andefasana izany. Toy izany no nitranga tamin'ny dokambarotry ny fampielezan-kevitry ny kandidà Fishman izay nahitana ireo olon-dehibe manao tatin-jaza (couches) toy ny zazakely ary mandihy sy milalao pianô, ary ireo vehivavy bevohoka sy ny feonkira fanta-daza amin'ny teny filamatry ny fampielezan-kevitra hoe “Fishman, ilay lavitry ny ratsy indrindra”. Mazava ho azy fa niteraka fanesoesoana izany, toy ity manaraka ity. Ny feo sy ny dikanteny ihany no niova, fa tsy nisy nanombinana ny sisa tamin'ny dokambarotra :
Nivoaka niaraka tamin'ny fanafihany manokana ny fifidianana ihany koa ny LaErre.tv: nahitana ny zava-drehetra azonao ampiasaina hanombohana ny sehatra politika ny fitaovana nampiasaina ho an'ny Kandidà ho Filoham-pirenena. Ahitana torohevitra toy izao: raha leon'ny fampanantenana ataon'ireo mpanao politika ianao, na leo ny fandefasana am-ponja rehefa mangalatra, nahoana no tsy mirotsaka ho kandidà mba hamahanao ny olanao manokana? Nanohy nanazava ny fahaiza-manao ilaina amin'izany ny lahatsary, ny fomba fiteny lamaody ilainao ary ireo tombony izay azonao rehefa mahazo ireo fitaovana ianao ary manaraka ny dingana.
Namoaka lahatsary mampihomehy momba an'i Otton Solis ihany koa ny Elchamukocr, izay tsy maintsy nampiato ny fampielezan-keviny ary nangataka fanampiana mba hanohizana izany tao amin'ny fahitalavitra satria lany ny volany. Ao anatin'ilay lahatsary, nikarakara fanentanana mandeha amin'ny fiara i Otton mba hanangom-bola: